7 anodhura e-mabhuku ekuchengetedza iwe mari | MaReaders ese
Uri kutsvaga zvakachipa e-mabhuku? Munguva pfupi yapfuura zviri kuwedzera kuve nebhuku remagetsi kana eReader, kunyangwe iri nzira chaiyo yekutumidza zita chigadzirwa ichi eBook, saka isu tinoshandisa izwi iri muchinyorwa chose, kuverenga nekunakidzwa kuverenga chero nguva nenzvimbo zvakanyanya nzira yakasununguka. Huwandu hwemidziyo yerudzi urwu inowanikwa pamusika iri kuwedzera, asi nhasi tinoda kukupa zvakachipa eBooks uye izvo zvinotibvumidza kunakidzwa nekuverenga kwedhijitari pasina kushandisa mari yakawandisa
Ndosaka mushure memazuva mashoma uchitsvaga netiweki yemanetwork uye kunyangwe kuyedza isinganzwisisike bhuku remagetsi isu tasarudza kuburitsa ino chinyorwa matinotora 7 anodhura uye akakwana emagetsi mabhuku kunakirwa nekuverenga kwedhijitari. Kana iwe uchida kutenga yako yekutanga e-bhuku kana usingade kushandisa mari yakawandisa, tora penzura nebepa kuti utore manotsi nekuti chimwe chezvinhu izvi zvatiri kuzokuratidza zvinogona kunge zvakakukwanira iwe mune chero nyaya.
1 Yakachipa eBooks kuenzanisa
5 Simba eReader Max
6 Bhora E03FL
Yakachipa eBooks kuenzanisa
Kindle, ikozvino nechiedza ...
Amazon Hapana mubvunzo kuti ndeimwe yevanonyanya kukosha vagadziri mumagetsi mabhuku emusika uye inopa akasiyana madhijidhi zvichienderana nerudzi rwese rwemushandisi uye nezvatinoda kushandisa. mabvazuva Basic Kindle, iyo yakagadziridzwa mazuva mashoma apfuura, ndiyo yekuisa mudziyo yekuidaidza neimwe nzira uye izvo zvichatibvumidza isu kutanga munyika yekuverenga kwedigital tichishandisa mari shoma.
Mhando yakakosha iyi inogona zvakare kuve yakanaka kune vese vashandisi vasingabvunze zvakawandisa bhuku ravo remagetsi uye vari kungotsvaga eBook yekushandisa nguva nenguva.
Pano tinokuratidza iyo akakosha maficha eiyi yakakosha Kindle iyo yatove kuwanikwa mune yayo nyowani vhezheni kubvira apfuura Chikunguru 20;
Zviyero: 160 x 115 x 9,1 mm
Kurema: 161 gramu
Ratidza: 6-inch neE Ink Pearl tekinoroji ine optimized font tekinoroji, 16 grey zviyero uye resolution ye600 x 800 pixels uye 167 dpi
Kubatana: USB chiteshi, Wifi
Yemukati ndangariro: 4 GB nekwanisi yezviuru zvemabhuku uye yemahara gore yekuchengetera ese eAmazon zvemukati
Bhatiri: zvinoenderana neruzivo rwunopihwa neAmazon runotora mavhiki akati wandei pasina chikonzero chekuchairisa chigadzirwa
MP3 mutambi: Kwete
Mafomu ebook akatsigirwa: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI isina kudzivirirwa, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nekutendeuka
Mutengo: 79 euros
Chokwadi vazhinji venyu mucharohwa nekuona mune ino runyorwa iyo Kindle Paperwhite, Asi ndizvozvo Ichi chishandiso cheAmazon ndeye eReader yakachipa, kana tikatarisa maficha anonakidza ayo anotipa nemutengo watingati hauna kunyanyisa. Hunhu uye tsananguro yechiratidziro haina kupokana, izvo zvinotibvumidzawo kuverenga mune chero nharaunda nenzvimbo sezvo ichitipa mwenje wakasanganiswa.
Isu tave kuenda kuzoongorora hukuru maficha uye kudomwa kweichi chigadzirwa cheAmazon;
Zviyero: 169 x 117 x 9,1 mm
Kurema: 205 gramu
Ratidza: 6-inch yakakwirira resolution ine 300 dpi uye yakavhenekerwa mwenje
Kubatana: WiFi, 3G uye USB
Yemukati ndangariro: 4 GB; nekwaniso yezviuru zvemabhuku
Bhatiri: Amazon inongoda kuti bhatiri igare kwemavhiki akati wandei nekushandisa kwese
Ebook fomati: Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, isina kuchengetedzwa MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nekutendeuka
Mutengo: 129.99 euros
Mutengo weiyi Kindle Paperwhite yakaderedzwa pamadhora gumi nemaviri, kana iri mutengo wakakwira, asi izvo zvarinotipa mukudzoka zvinopfuura kunakidza. Zvakare kana usiri kuchimbidza kutenga eReader yako nyowani, iwe unofanirwa kuziva kuti Amazon nguva nenguva inoderedza zvakanyanya mutengo wayo Kindle, saka pamwe nekuchema kudiki uye nekuteerera unogona kuzvitenga nemutengo unopfuura unonaka .
Kobo Pamwe chete neAmazon, ndiwo makambani maviri anozivikanwa mumusika weReader. Makambani ese ari maviri, pamusoro pekuve nemabhuku emagetsi ane simba uye anodhura pamusika, anopawo vashandisi zvimwe zvigadzirwa zvinodhura zvine hunhu hwakaenzana.
Muenzaniso weizvi ndeuyu Kobo Leisosa kuti nemutengo unodarika zana euros zvishoma kwazvo, inogona kunge iri sarudzo huru yekupinda munyika yekuverenga kwedhijitari uye kunakirwa nemabhuku edigital zvakanyanya.
Tevere isu tichaongorora huru Zvimiro uye Magadzirirwo eiyi Kobo Leisosa;
Zviyero: 112 x 92 x 159 mm
Kurema: 260 gramu
Screen: 6-inch Pearl E Ink inobata
Kubatana: Wi-Fi 802.11 b / g / n uye Micro USB
Yemukati ndangariro: 8 GB kana chii chakafanana, mukana wekuchengetedza kusvika kumazana matanhatu ezviuru mabhuku
Bhatiri: inguva yakatarwa uye nekushandisa kwese kwemwedzi miviri
Ebook mafomati: EPUB, PDF, MOBI, JPG, TXT uye Adobe DRM
Mutengo: 99 euros
Simba eReader Max
Kambani yeSpain Energy Sistem yagara ichipa zvinonakidza zvishandiso zvevaverengi vese kubva payakasikwa. Munguva pfupi yadarika vakaparura mabhuku akasiyanasiyana emagetsi pamusika, mamwe acho ane mutengo wakaderera kwazvo. mabvazuva Simba eReader Max Iyo ndeimwe yadzo uye isu tinogona kuitenga kweinenge 90 euros.
Tevere, isu tichaongorora iyo main maficha uye kudomwa kweiyi eReader kubva Energy Sistem;
Vipimo: 67 X 113 x 8,1 mm
Kurema: 390 gramu
Screen: 6 inches ne resolution ye600 x 800 pixels
Yemukati ndangariro: 8 GB inowedzerwa kuburikidza nemakadhi e MicroSD
Bhatiri: hukuru hukuru hunotibvumira kushandisa chishandiso kwemavhiki
Mafomu ebook akatsigirwa: ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Mutengo: 86,80 euros
Musika wemabhuku wemagetsi wakura zvakanyanya mumazuva apfuura, uye mamwe makambani akapinda mairi, asingazivikanwe neruzhinji, asi avo vakatipa zvishandiso zvinonakidza pamitengo inotonyanya kunakidza. Muenzaniso weiyi ndiyo Bhora E03FL, inotengeswa neAmazon, iyo inogara iri yekuwedzera yekuchengetedza.
BQ Cervantes Kubata Chiedza chakavharwa
Mutengo wayo ndeye 75 euros uye pasina kupokana, kune izvo vazhinji vashandisi vatiri kutsvaga, zvingave zvinopfuura zvakakwana. Kuva nebhuku remagetsi zvinogoneka, asi zvakare zvinokwanisika kuti iine hunopfuura hunoshamisa hunhu uye simba. Pazasi isu tinokuratidza ayo maitiro uye zvakatemwa kuitira kuti iwe ugone kudzidza zvakawanda nezvazvo.
Zviyero: 165 x 37 x 0.22 mm
Kurema: 159 gramu
Screen: 6 inches ne resolution ye800 x 600 pixels
Yemukati ndangariro: 4 GB inowedzerwa kuburikidza nemakadhi e MicroSD
Bhatiri: Lithium ion ine anosvika kumaawa e720 ehupenyu hwebhatiri
Ebook mafomati: CHM, DOC, DjVu, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT, ePub
Mutengo: 75 euros
Kana bhajeti yako yekuwana eReader idiki, izvi PocketBook kambani e-bhuku Iyo inogona kuve huru sarudzo uye mutengo wayo unongova ma89,99 euros, kunyange hazvo sezvo uchinyatso kuziva pamutengo uyu ivo havazotipe isu chishandiso chisina simba zvakanyanya kana zvakare kufadza kunakidzwa nekuverenga kwedhijitari.
Ehezve, kana iwe uchida kutanga munyika yekuverenga kwedhijitari, kana iwe hausi muverengi anofarira, chishandiso ichi chingave chakanakira iwe. Pazasi iwe unogona kuziva iyo main maficha uye maratidziro yeReader iyi;
Zviyero: 161.3 × 108 × 8 mm
Kurema: 155 gramu
Ratidza: 6-inch e-ink ine resolution ye758 x 1024
Yemukati ndangariro: 4 GB ine mukana wekuwedzera kuchengetedza kuburikidza nemakadhi e MicroSD
Bhatiri: 1.800 mAh
Ebook mafomati: PDF, TXT, FB2, EPUB, RTF, PDB, MOBI uye HTML
Kana iyo Simba eReader Screenlight Isu tinoona chiri chinodhura kwazvo chishandiso, isu tinogara tine yakachipa e-bhuku imwe nzira kubva kune imwechete kambani. Uye ndezvekuti nekudzikisira kwedu kwekunyepedzera zvishoma tinogona kuwana iyo Energy Sistem eReader Slim, bhuku rakachipa remagetsi rine mabhenefiti anogona kuve anopfuura zvakakwana kune chero anoda kuverenga.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma zvakadzama izvo iyi eReader inotipa, saka tinokuratidza yayo main maficha uye maratidziro;
Zviyero: 113 x 80 x 167 mm
Kurema: 399 gramu
Screen: 6 inches ine resolution ye600 x 800 pixels. Eink Pearl HD, yemagetsi ingi 16 kuchena mazinga.
Yemukati ndangariro: 8 GB nekwaniso yekukuwedzera kuburikidza nemakadhi e MicroSD
Bhatiri: Yakareba lithiamu
Ebook mafomati: ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Mutengo: 69.90 euros
Zviripachena kuti isu hatisi kutarisana nerimwe remabhuku emagetsi akanakisa pamusika, asi inogona kuve sarudzo huru, ine hupfumi hwakawanda uye izvo zvinotibvumidza zvakakwana kuti tinakirwe nekuverenga kwedhijitari mune inopfuura nzira inonakidza.
Wakatofunga here kuti ndeipi eReader pane ese atakaratidza kuti uri kuenda kunotenga?. Tiudze munzvimbo yakachengeterwa makomenti pane ino positi kana kuburikidza nechero yemasocial network matiri. Zvakare tizivise kana iwe ukawedzera mamwe anodhura eBook erudzi urwu kune irwo runyorwa, nemutengo wakadzikira, uye izvo zvinogona kutiita kuti tinakidzwe nekuverenga kwedhijitari.
Kana iwe uchida kuona mamwe maReaders mamodheru, kubatana uku Iwe unowana izvo zvakanakisa zvinopihwa kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo inonyatsokodzera zvauri kutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Hardware » vaverengi » Akachipa e-mabhuku
Mangwanani. Ndine munhu anoverenga kekutanga, kunyanya Energy eReader Screenlight HD uye handizive kuti ndotenga sei mabhuku ekuti ndiadownloade pairi. Masayiti mazhinji anondiudza kuti ma ebook avo haapindirani neredu yangu. ndibatsire?, Ndatenda
New Kindle Oasis, Yekutanga Isina Mvura eReader yeAmazon